War – Alpha Premium
Operation Mincemeat (2022) ##unicode "Operaion Mincemeat" ဆိုတဲ့ကားလေးကတော့စဈပှဲဒရမျမာအမြိုးအစားဖွဈပွီး ၁၉၄၃ ခုနှဈ မဟာမိတျတပျတှေ ဆဈစလီကိုထိုးဖောကျဖို့စဈဆငျရေးကို ဟဈတလာရဲ့ နာဇီတပျတှမေသိအောငျဖုံးကှယျဖို့လုပျခဲ့တဲ့လှညျ့စားမှုစဈဆငျရေးအကွောငျးကိုရိုကျကူးတငျဆကျထားတဲ့ ကားလေးဖွဈပါတယျ မဟာမိတျတပျတှဟော သူတို့ရဲ့ဆဈစလီကိုကြူးကြျောမယျ့အကွံကိုနာဇီတပျတှကေ ကွိုတငျသိထားတဲ့အတှကျ သူတို့စဈတပျထိခိုကျနဈနာမှုမြားမှာကိုသိနပေါတယျ အဲ့ဒါကွောငျ့ဆဈစလီကိုကြူးကြျောမယျ့အကွံကို အာရုံလှဲသှားပွီးတော့ ဂရိကိုကြူးကြျောမယျဆိုတဲ့သတငျးမှားကိုယုံကွညျစဖေို့အတှကျကွံစညျရပါတော့တယျ သူတို့ရဲ့အစီအစဉျကတော့ဂရိကိုကြူးကြျောမယျဆိုတဲ့အခကျြအလကျတှပေါတဲ့စဈသားအလောငျးတဈလောငျးကို ဆဈစလီကြှနျးကိုမြောလိုကျဖို့ဖွဈပါတယျ ဒါပမေယျ့ခကျခဲတဲ့အပိုငျးတှကေရှိနပေါသေးတယျ ရငျခေါငျးခှဲစိတျရလဒျမှာရနေဈသတေယျလို့ပျေါအောငျဘယျလိုလုပျမလဲ စာရှကျစာတမျးတှဂြောမနီတှလေကျထဲအတိအကဘြယျလိုလုပျမလဲ အသေးစိတျလှနျးတဲ့နာဇီတှလှေညျ့စားမှုမှာထောငျခြောကျကသြှားအောငျအကှကျကကြဘြယျလိုကွံစညျမလဲ ဆိုတဲ့အပိုငျးတှရှေိနပေါသေးတယျ မဟာမိတျတပျတှအေနနေဲ့ဒီလိုဟာကှကျတှအေားလုံးကိုပိရိအောငျဘယျလိုကွံစညျသှားလဲ ဟဈတလာရဲ့နာဇီတပျတှကေိုအကှကျကကြဘြယျလိုအနိုငျယူသှားလဲဆိုတာကိုမှတျတမျးရုပျရှငျသဖှယျကွညျ့ရှု ရမယျ့ဇာတျကားကောငျးလေးဖွဈလို့ လကျမလှတျတမျးကွညျ့ကွဖို့ညှနျးပေးလိုကျတယျနျော ##zawgyi "Operaion Mincemeat" ဆိုတဲ့ကားလေးကတော့စစ်ပွဲဒရမ်မာအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ၁၉၄၃ ခုနှစ် မဟာမိတ်တပ်တွေ ဆစ်စလီကိုထိုးဖောက်ဖို့စစ်ဆင်ရေးကို ဟစ်တလာရဲ့ နာဇီတပ်တွေမသိအောင်ဖုံးကွယ်ဖို့လုပ်ခဲ့တဲ့လှည့်စားမှုစစ်ဆင်ရေးအကြောင်းကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ ကားလေးဖြစ်ပါတယ် မဟာမိတ်တပ်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ဆစ်စလီကိုကျူးကျော်မယ့်အကြံကိုနာဇီတပ်တွေက ကြိုတင်သိထားတဲ့အတွက် သူတို့စစ်တပ်ထိခိုက်နစ်နာမှုများမှာကိုသိနေပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့်ဆစ်စလီကိုကျူးကျော်မယ့်အကြံကို အာရုံလွှဲသွားပြီးတော့ ဂရိကိုကျူးကျော်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှားကိုယုံကြည်စေဖို့အတွက်ကြံစည်ရပါတော့တယ် သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဂရိကိုကျူးကျော်မယ်ဆိုတဲ့အချက်အလက်တွေပါတဲ့စစ်သားအလောင်းတစ်လောင်းကို ဆစ်စလီကျွန်းကိုမျောလိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့်ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းတွေကရှိနေပါသေးတယ် ရင်ခေါင်းခွဲစိတ်ရလဒ်မှာရေနစ်သေတယ်လို့ပေါ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ စာရွက်စာတမ်းတွေဂျာမနီတွေလက်ထဲအတိအကျဘယ်လိုလုပ်မလဲ အသေးစိတ်လွန်းတဲ့နာဇီတွေလှည့်စားမှုမှာထောင်ချောက်ကျသွားအောင်အကွက်ကျကျဘယ်လိုကြံစည်မလဲ ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေရှိနေပါသေးတယ် မဟာမိတ်တပ်တွေအနေနဲ့ဒီလိုဟာကွက်တွေအားလုံးကိုပိရိအောင်ဘယ်လိုကြံစည်သွားလဲ ဟစ်တလာရဲ့နာဇီတပ်တွေကိုအကွက်ကျကျဘယ်လိုအနိုင်ယူသွားလဲဆိုတာကိုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်သဖွယ်ကြည့်ရှု ရမယ့်ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်လို့ လက်မလွှတ်တမ်းကြည့်ကြဖို့ညွှန်းပေးလိုက်တယ်နော် Review – Myet Chel File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hmue & Phyu Sin Encoded by Arrow ================================================================================== GDtot လင့်ဒေါင်းနည်း (အစိမ်းပြထားတာကိုကလစ်ပါ) GDtotဒေါငျးနညျး (uc browser ကိုသုံးရငျပိုကောငျးပါတယျ) Mega.nz Link ဒေါငျးနညျး Gdrive Linkဒေါငျးနညျး
IMDB: 6.9/10 1,447 votes
LOC: Kargil (2003) (App member only) ##unicode LOC Kargil ဆိုတဲ့ကားလေးဟာဆိုရငျပါကစ်စတနျနိုငျငံနဲ့ အိန်ဒိယနိုငျငံနှဈနိုငျငံကွားဖွဈပှားခဲ့တဲ့ ကာဂြေးစဈပှဲကိုမှတျတမျးတငျရိုကျကူးထားတဲ့စဈကားကောငျးလေးတဈကားဖွဈပါတယျ တကယျ့နာမညျကွီးမငျးသားတှဖွေဈတဲ့ Abhishek Bachchan, Vishal Veeru Devgan, Saif Ali Khan တို့လညျးပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါတယျ ၁၉၉၉ခုနှဈမလေမှပါကစ်စတနျတှဟောကတျရျှမီးယားပွညျသူတှအေဖွဈယောငျဆောငျပွီးအိန်ဒိယနယျစပျဘကျကို ကြူးကြျောဝငျရောကျလာပါတယျ ပါကစ်စတနျတှရေဲ့ကြူးကြျောမှုကိုတားဆီးဖို့အတှကျစတငျခဲ့တဲ့ဒီစဈပှဲကွီးဟာဆိုရငျ ရှညျလြားပွီးခကျခဲခဲ့တဲ့တိုကျပှဲကွီးတဈခုလညျးဖွဈပါတယျ အမွငျ့ပိုငျးဒသေတှမှောနရောယူထားတဲ့ပါကစ်စတနျစဈတပျတှကေိုတိုကျခိုကျနိုငျဖို့အတှကျဆိုတာအရမျးကို ခကျခဲခဲ့ပါတယျ ပါကစ်စတနျတှဟောအမွငျ့ပိုငျးနရောကောငျးကောငျးမှာစခနျးခထြားပွီးအပျေါစီးကနေ အိန်ဒိယစဈတပျတှရေဲ့လှုပျရှားမှုအသှားအလာကိုစောငျ့ကွညျ့နတောဖွဈပါတယျ ဒါကွောငျ့လညျးအိန်ဒိယစဈတပျအနနေဲ့တိုကျခိုကျရမှာအားနညျးပွီးအကအြဆုံးမြားခဲ့ရတာပါ ဒီလိုမြိုးရှညျလြားပွီးခကျခဲလှတဲ့တိုကျပှဲကွီးကိုအိန်ဒိယစဈသားတှဘေယျလိုမြိုးအသကျတှစေတေးပွီး တိုကျခိုကျခဲ့ရတယျဆိုတာကိုရိုကျကူးတငျဆကျပွထားတဲ့ဇာတျကားဖွဈလို့လကျမလှတျတမျးကွညျ့ရှုသငျ့တဲ့ ဇာတျကားကောငျးတဈကားဖွဈပါတယျ ##zawgyi LOC Kargil ဆိုတဲ့ကားလေးဟာဆိုရင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကာဂျေးစစ်ပွဲကိုမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးထားတဲ့စစ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် တကယ့်နာမည်ကြီးမင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ Abhishek Bachchan, Vishal Veeru Devgan, Saif Ali Khan တို့လည်းပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ၁၉၉၉ခုနှစ်မေလမှပါကစ္စတန်တွေဟာကတ်ရ်ှမီးယားပြည်သူတွေအဖြစ်ယောင်ဆောင်ပြီးအိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်ကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာပါတယ် ပါကစ္စတန်တွေရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုတားဆီးဖို့အတွက်စတင်ခဲ့တဲ့ဒီစစ်ပွဲကြီးဟာဆိုရင် ရှည်လျားပြီးခက်ခဲခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် အမြင့်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေရာယူထားတဲ့ပါကစ္စတန်စစ်တပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာအရမ်းကို ခက်ခဲခဲ့ပါတယ် ပါကစ္စတန်တွေဟာအမြင့်ပိုင်းနေရာကောင်းကောင်းမှာစခန်းချထားပြီးအပေါ်စီးကနေ အိန္ဒိယစစ်တပ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုအသွားအလာကိုစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်လည်းအိန္ဒိယစစ်တပ်အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ရမှာအားနည်းပြီးအကျအဆုံးများခဲ့ရတာပါ ဒီလိုမျိုးရှည်လျားပြီးခက်ခဲလှတဲ့တိုက်ပွဲကြီးကိုအိန္ဒိယစစ်သားတွေဘယ်လိုမျိုးအသက်တွေစတေးပြီး တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပြထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်လို့လက်မလွှတ်တမ်းကြည့်ရှုသင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် Review – Phyu Sin File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin & Hmue Encoded by Arrow ==================================================================== App ဒေါင်းရန် App Link မနျဘာဝငျလိုသူမြား viber – 0969117714
IMDB: 5.4/10 2,989 votes
Drawing Sword Fighting Ghost Cry (2022) ##unicode ဒီတဈခေါကျမှာတော့ စဈကားကောငျးကောငျးလေးတဈကားကိုရှေးခယျြပေးထားပါတယျ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ ၁၉၄၂ ခုနှဈမှာဂပြနျစဈတပျတှဟောတရုတျနိုငျငံရှနျရှီးအနောကျမွောကျပိုငျး အခွစေိုကျစခနျးကိုသိမျးပိုကျလိုကျပါတယျ ဂပြနျစဈတပျရဲ့ထောငျလှားမှုကိုအမွဈဖွတျဖို့အတှကျတပျမှူးလီယှငျလုံကလညျး ပငျးအနျခရိုငျခံတပျကိုတိုကျခိုကျဖို့ခြီတကျသှားပါတယျ အဲ့ဒီမှာဂပြနျစဈတပျဟာပငျးအနျခံတပျကိုတပျကူပို့ဖို့ အရေးတကွီးလိုအပျလာပါတော့တယျ ပငျးအနျကိုအထိအခိုကျနညျးနညျးနဲ့ အမွနျဆုံးရောကျနိုငျမယျ့ဖွတျလမျးကတော့ ဝိဉာဉျငိုတောငျကွားလမျးပါပဲ ဒါကွောငျ့တရုတျစဈတပျတှအေနနေဲ့ ဝိဉာဉျငိုတောငျကွားလမျးမပါ သှားအောငျအစှမျးကုနျခုခံရပါတော့တယျ လကျနကျအငျအားအသာကွီးသာလှနျနတေဲ့ဂပြနျစဈတပျကိုတားဆီးနိုငျပါ့မလား ပငျးအနျခံတပျကိုရောသိမျးပိုကျနိုငျပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ဇာတျလမျးထဲမှာဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့ပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ စစ်ကားကောင်းကောင်းလေးတစ်ကားကိုရွေးချယ်ပေးထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ၁၉၄၂ ခုနှစ်မှာဂျပန်စစ်တပ်တွေဟာတရုတ်နိုင်ငံရှန်ရှီးအနောက်မြောက်ပိုင်း အခြေစိုက်စခန်းကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ် ဂျပန်စစ်တပ်ရဲ့ထောင်လွှားမှုကိုအမြစ်ဖြတ်ဖို့အတွက်တပ်မှူးလီယွင်လုံကလည်း ပင်းအန်ခရိုင်ခံတပ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ချီတက်သွားပါတယ် အဲ့ဒီမှာဂျပန်စစ်တပ်ဟာပင်းအန်ခံတပ်ကိုတပ်ကူပို့ဖို့ အရေးတကြီးလိုအပ်လာပါတော့တယ် ပင်းအန်ကိုအထိအခိုက်နည်းနည်းနဲ့ အမြန်ဆုံးရောက်နိုင်မယ့်ဖြတ်လမ်းကတော့ ဝိဉာဉ်ငိုတောင်ကြားလမ်းပါပဲ ဒါကြောင့်တရုတ်စစ်တပ်တွေအနေနဲ့ ဝိဉာဉ်ငိုတောင်ကြားလမ်းမပါ သွားအောင်အစွမ်းကုန်ခုခံရပါတော့တယ် လက်နက်အင်အားအသာကြီးသာလွန်နေတဲ့ဂျပန်စစ်တပ်ကိုတားဆီးနိုင်ပါ့မလား ပင်းအန်ခံတပ်ကိုရောသိမ်းပိုက်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော် Review – Phyu Sin File Size – 1GB Format…mp4 Quality :,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow
IMDB: 6.0/10 1k votes
Drawing Sword Fighting Ghost Cry (2022)
The Pilot. A Battle for Survival (2022) ##unicode "The Pilot:A Battle for Survival" ဆိုတဲ့ကားလေးဟာဆိုရငျဒုတိယကမ်ဘာစဈအတှငျးကရုရှားလယောဉျမှူးတဈယောကျရဲ့ ဖွဈရပျမှနျအကွောငျးအရာကိုရိုကျကူးတငျဆကျထားတာဖွဈပါတယျ ၁၉၄၁ ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလမှာ ဂြာမနျတှရေဲ့အနောကျမွောကျတပျဦးစဈကွောငျးကမျောစကိုကိုဦးတညျပွီးစဈကွောငျးခြီလာပါတယျ နီကိုလိုငျကိုမလကျဟာရနျသူ့စဈကွောငျးကိုတားဆီးတဲ့မဈရှငျအတှငျးမှာပဲသူ့ရဲ့ II-2 လယောဉျဟာပဈခခြံလိုကျရပါတယျ နီကိုလိုငျကိုမလကျရဲ့လယောဉျဟာဆိုရငျဝေးလံတဲ့သဈတောတဈခုအတှငျးကိုပကျြကသြှားခဲ့တာဖွဈပွီး ကံဆိုးခငျြတော့ရနျသူတှရေဲ့နယျမွနေဲ့နီးနီးကိုရောကျသှားခဲ့တာပါ နီကိုလိုငျကိုမလကျတဈယောကျငတျမှတျမှု အအေးဒဏျကိုအံတုရငျးရနျသူတှလေကျကလှတျအောငျအသကျရှငျဖို့အတှကျရုနျးကနျရပါတော့တယျ နီကိုလိုငျကိုမလကျတဈယောကျရနျသူတှလေကျကလှတျအောငျဘယျလိုမြိုးအခကျအခဲတှကွေားက ကွိုးစားသှားမလဲ ဘေးလှတျရာကိုပွနျရောကျနိုငျပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ဇာတျလမျးထဲမှာဆကျလကျကွည့ရှုအားပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi "The Pilot:A Battle for Survival" ဆိုတဲ့ကားလေးဟာဆိုရင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကရုရှားလေယာဉ်မှူးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်အကြောင်းအရာကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ၁၉၄၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ ဂျာမန်တွေရဲ့အနောက်မြောက်တပ်ဦးစစ်ကြောင်းကမော်စကိုကိုဦးတည်ပြီးစစ်ကြောင်းချီလာပါတယ် နီကိုလိုင်ကိုမလက်ဟာရန်သူ့စစ်ကြောင်းကိုတားဆီးတဲ့မစ်ရှင်အတွင်းမှာပဲသူ့ရဲ့ II-2 လေယာဉ်ဟာပစ်ချခံလိုက်ရပါတယ် နီကိုလိုင်ကိုမလက်ရဲ့လေယာဉ်ဟာဆိုရင်ဝေးလံတဲ့သစ်တောတစ်ခုအတွင်းကိုပျက်ကျသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကံဆိုးချင်တော့ရန်သူတွေရဲ့နယ်မြေနဲ့နီးနီးကိုရောက်သွားခဲ့တာပါ နီကိုလိုင်ကိုမလက်တစ်ယောက်ငတ်မွတ်မှု အအေးဒဏ်ကိုအံတုရင်းရန်သူတွေလက်ကလွတ်အောင်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ရုန်းကန်ရပါတော့တယ် နီကိုလိုင်ကိုမလက်တစ်ယောက်ရန်သူတွေလက်ကလွတ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲတွေကြားက ကြိုးစားသွားမလဲ ဘေးလွတ်ရာကိုပြန်ရောက်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့ရှုအားပေးကြပါဦးနော် Review – Phyu Sin File Size – 900MB,2GB Format…mp4 Quality :,720p WED-DL,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow
IMDB: 6.5/10 321 votes
The Pilot. A Battle for Survival (2022)
1945 (2022) ##unicode ဒီဇာတျကားကတော့ ၁၉၄၅ခုနှဈ ဒုတိယကမ်ဘာစဈကာလမှာ အိန်ဒိယရော မွနျမာပွညျရော ဗွိတိသြှနယျခြဲ့လကျအောကျမှာကရြောကျနတေဲ့အခြိနျ မွနျမာပွညျမှာရောကျနတေဲ့ အိန်ဒိယပွညျထောငျစုတပျမတျော INAရဲ့အကွောငျးကိုအခွခေံပွီးရိုကျကူးထားတဲ့ဇာတျလမျးဖွဈလို့ အတျောကွညျ့လို့ကောငျးမယျ့ဇာတျကားတဈကားပါပဲ မွနျမာပွညျက ဂပြနျတှနေဲ့ပူးပေါငျးပွီး ဗွိတိသြှကိုတိုကျထုတျတဲ့အတိုငျး အိန်ဒိယတှကေလညျး မွနျမာပွညျထဲကဗွိတိသြှတှကေိုတိုကျမယျ အိန်ဒိယကိုလညျးသူတို့ပွနျသိမျးမယျဆိုပွီး နယျသာဂြီဆိုတဲ့ခေါငျးဆောငျက မွနျမာပွညျကတောတှထေဲမှာ INAတပျမတျောကိုဖှဲ့စညျးခဲ့ပါတယျ အဲဒီမှာ အာဒီဆိုတဲ့ကောငျလေးက အဖဆေုံးမှ လနျဒနျကနေ မွနျမာပွညျကိုပွနျရောကျလာပွီး နယျခြဲ့တှရေဲ့ယုတျမာရကျစကျမှုကိုမသိခဲ့တဲ့လူပါ အိန်ဒိယတှေ မွနျမာပွညျမှာအသတျခံနရေတာကိုလညျး သူမသိခဲ့ပါဘူး သူနဲ့လကျထပျမယျ့သတို့သမီးရဲ့အဖကေ နယျခြဲ့တှရေဲ့ လကျပါးစဒေလနျလုပျနခေဲ့တာပေါ့ ငှကွေေးဒါနပွညျ့စုံပွီး အမှနျတရားကိုမသိတဲ့အာဒီတဈယောကျ တဈနေ့ အဓိကရုဏျးတဈခုမှာ သူ့သူငယျခငျြးအသတျခံလိုကျရတဲ့အခြိနျမှာတော့ သူတို့တိုငျးပွညျသူ့ကြှနျဘဝရောကျနတော ဘယျလောကျဆိုးဝါးကွောငျးသိခဲ့ရတယျ အာဒီရဲ့မြိုးခဈြစိတျနဲ့တျောလှနျရေးစိတျဓာတျတှပေေါကျဖှားလာပွီး INAတပျမတျောထဲကို သူဘယျလိုဝငျခဲ့လဲ တျောလှနျရေးအတှကျ မွနျမာပွညျက အိန်ဒိယတှေ ဘယျလိုကွိုးစားတိုကျထုတျကွမလဲဆိုတာ ဒီဇာတျကားမှာမွငျတှရေ့မှာပဲဖွဈလို့ လကျမလှတျတမျးကွညျ့ရူအားပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi ဒီဇာတ်ကားကတော့ ၁၉၄၅ခုနှစ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာ အိန္ဒိယရော မြန်မာပြည်ရော ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့လက်အောက်မှာကျရောက်နေတဲ့အချိန် မြန်မာပြည်မှာရောက်နေတဲ့ အိန္ဒိယပြည်ထောင်စုတပ်မတော် INAရဲ့အကြောင်းကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်လို့ အတော်ကြည့်လို့ကောင်းမယ့်ဇာတ်ကားတစ်ကားပါပဲ မြန်မာပြည်က ဂျပန်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး ဗြိတိသျှကိုတိုက်ထုတ်တဲ့အတိုင်း အိန္ဒိယတွေကလည်း မြန်မာပြည်ထဲကဗြိတိသျှတွေကိုတိုက်မယ် အိန္ဒိယကိုလည်းသူတို့ပြန်သိမ်းမယ်ဆိုပြီး နယ်သာဂျီဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်က မြန်မာပြည်ကတောတွေထဲမှာ INAတပ်မတော်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ် အဲဒီမှာ အာဒီဆိုတဲ့ကောင်လေးက အဖေဆုံးမှ လန်ဒန်ကနေ မြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောက်လာပြီး နယ်ချဲ့တွေရဲ့ယုတ်မာရက်စက်မှုကိုမသိခဲ့တဲ့လူပါ အိန္ဒိယတွေ မြန်မာပြည်မှာအသတ်ခံနေရတာကိုလည်း သူမသိခဲ့ပါဘူး သူနဲ့လက်ထပ်မယ့်သတို့သမီးရဲ့အဖေက နယ်ချဲ့တွေရဲ့ လက်ပါးစေဒလန်လုပ်နေခဲ့တာပေါ့ ငွေကြေးဒါနပြည့်စုံပြီး ...
The Lost Strait (2018) (App member only) ##unicode ဒီတဈခေါကျမှာတော့အီရနျစဈကားလေးတဈကားကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ "The Lost Strait"ဆိုတဲ့ဇာတျကားလေးဟာဆိုရငျဆုပေါငျးငါးဆုအထိရရှိခဲ့အပွငျ ဆနျကာတငျဆုစာရငျးမှာလညျး ၆ နရောအထိဝငျခဲ့တဲ့ကားလေးဖွဈပါတယျ ဇာတျလမျးအကွောငျးအရာလေးကတော့ ၁၉၈၀ ခုနှဈလောကျကစပွီးအီရနျနဲ့အီရတျဟာ ၈ နှဈကွာအထိတိုကျပှဲအရှညျကွီးဖွဈပှားခဲ့ပါတယျ ဒီလိုနဲ့စဈပှဲကွီးအဆုံးသတျသှားပွီဆိုပွီး အီရနျစဈသားတှအေိမျပွနျမယျ့အခြိနျမှာပဲနယျစပျမှာအီရတျတပျတှကြေူးကြျောလာတယျဆိုပွီး သတငျးရောကျလာပါတယျ စဈသားတှအေနနေဲ့လညျးသူတို့ကိုနှဈပေါငျးမြားစှာအိမျမှာ စောငျ့နကွေတဲ့မိသားစုတှဆေီကိုပွနျသှားရမလား စဈပှဲထဲကိုပွနျပွီးတော့ဝငျသှားရမလားဆိုပွီး အရမျးကိုရှေးခယျြရခကျခဲ့ပါတယျ ရနျသူ့စဈတပျကွီးဟာလညျးအဘူဂိုရကျရလေကျကွားကိုသာ ဖွတျနိုငျခဲ့ရငျမွို့တှကေိုပါသိမျးပိုကျလာနိုငျတဲ့အနအေထားမှာရှိနတေဲ့အတှကျ အီရနျစဈသားတှဟောရလေကျကွားကိုမဖွတျနိုငျအောငျအစှမျးကုနျကာကှယျကွရပါတော့တယျ အီရနျစဈသားတှအေနနေဲ့ရလေကျကွားကိုဘယျလိုခကျခကျခဲခဲကာကှယျပွီး ရနျသူ့တပျတှကေိုရငျဆိုငျခဲ့ရတယျဆိုတာကိုအသေးစိတျရိုကျကူးပွထားတဲ့ ကားလေးဖွဈလို့ကွညျ့ရှုအားပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အီရန်စစ်ကားလေးတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် "The Lost Strait"ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးဟာဆိုရင်ဆုပေါင်းငါးဆုအထိရရှိခဲ့အပြင် ဆန်ကာတင်ဆုစာရင်းမှာလည်း ၆ နေရာအထိဝင်ခဲ့တဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ ၁၉၈၀ ခုနှစ်လောက်ကစပြီးအီရန်နဲ့အီရတ်ဟာ ၈ နှစ်ကြာအထိတိုက်ပွဲအရှည်ကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် ဒီလိုနဲ့စစ်ပွဲကြီးအဆုံးသတ်သွားပြီဆိုပြီး အီရန်စစ်သားတွေအိမ်ပြန်မယ့်အချိန်မှာပဲနယ်စပ်မှာအီရတ်တပ်တွေကျူးကျော်လာတယ်ဆိုပြီး သတင်းရောက်လာပါတယ် စစ်သားတွေအနေနဲ့လည်းသူတို့ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအိမ်မှာ စောင့်နေကြတဲ့မိသားစုတွေဆီကိုပြန်သွားရမလား စစ်ပွဲထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်သွားရမလားဆိုပြီး အရမ်းကိုရွေးချယ်ရခက်ခဲ့ပါတယ် ရန်သူ့စစ်တပ်ကြီးဟာလည်းအဘူဂိုရက်ရေလက်ကြားကိုသာ ဖြတ်နိုင်ခဲ့ရင်မြို့တွေကိုပါသိမ်းပိုက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေတဲ့အတွက် အီရန်စစ်သားတွေဟာရေလက်ကြားကိုမဖြတ်နိုင်အောင်အစွမ်းကုန်ကာကွယ်ကြရပါတော့တယ် အီရန်စစ်သားတွေအနေနဲ့ရေလက်ကြားကိုဘယ်လိုခက်ခက်ခဲခဲကာကွယ်ပြီး ရန်သူ့တပ်တွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုအသေးစိတ်ရိုက်ကူးပြထားတဲ့ ကားလေးဖြစ်လို့ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးနော် Review – Phyu Sin File Size – 1.4GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL Genre : Action,War Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow ==================================================================== App ဒေါငျးရန် App Link မနျဘာဝငျလိုသူမြား viber – 09691177142
IMDB: 6.6/10 1,943 votes
White Soldier (2014) (App member only) ##unicode ဒီတဈခါမှာတော့ ဖွဈရပျမှနျစဈကားတဈကားကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ ဗီယကျနမျကို ပွငျသဈတှနေယျခြဲ့ကြူးကြျောအုပျခြုပျထားခြိနျက ဟိုခြီမငျဦးဆောငျတဲ့တျောလှနျရေးပုနျကနျမှုရဲ့ဖွဈရပျမှနျဖွဈစဉျတှကေို ဒီဇာတျကားမှာမွငျတှရေ့မှာပါ ဗီယကျနမျမှာ ဂပြနျတှလေကျနကျခသြှားခြိနျမှာ ပွငျသဈတှကေ သူတျောကောငျးယောငျဆောငျပွီး နယျခြဲ့ဝငျလုပျပါတယျ ဒါကိုလကျမခံတဲ့ ဟိုခြီမငျဦးဆောငျတဲ့ ဗီယကျမငျဆိုတဲ့တျောလှနျရေးတပျဖှဲ့ပျေါပေါကျလာခဲ့ပါတယျ ပွငျသဈတှရေဲ့ယုတျမာရကျစကျတဲ့လုပျရပျတှကေိုလကျမခံနိုငျတဲ့ပွငျသဈစဈတပျဗိုလျတဈယောကျက ဗီယကျမငျတျောလှနျရေးတပျမတျောထဲကို အလငျးဝငျသှားခဲ့ပါတယျ ဒီဇာတျကားရဲ့ The white soldierဆိုတာ လူဖွူစဈသားဖွဈတဲ့ သူ့ကိုရညျညှနျးခဲ့တာပါ ပွငျသဈစဈတပျရဲ့ရကျစကျကွမျးကွူတျတဲ့လုပျရပျတှေ၊ဗီယကျနမျပွညျသူတှရေဲ့သနားဖှယျရာ အဖွဈအပကျြတှကေို ဒီဇာတျကားမှာမွငျတှရေ့မှာပဲဖွဈလို့ခံစားအားပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi ဒီတစ်ခါမှာတော့ ဖြစ်ရပ်မှန်စစ်ကားတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဗီယက်နမ်ကို ပြင်သစ်တွေနယ်ချဲ့ကျူးကျော်အုပ်ချုပ်ထားချိန်က ဟိုချီမင်ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးပုန်ကန်မှုရဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ဖြစ်စဉ်တွေကို ဒီဇာတ်ကားမှာမြင်တွေ့ရမှာပါ ဗီယက်နမ်မှာ ဂျပန်တွေလက်နက်ချသွားချိန်မှာ ပြင်သစ်တွေက သူတော်ကောင်းယောင်ဆောင်ပြီး နယ်ချဲ့ဝင်လုပ်ပါတယ် ဒါကိုလက်မခံတဲ့ ဟိုချီမင်ဦးဆောင်တဲ့ ဗီယက်မင်ဆိုတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ် ပြင်သစ်တွေရဲ့ယုတ်မာရက်စက်တဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ပြင်သစ်စစ်တပ်ဗိုလ်တစ်ယောက်က ဗီယက်မင်တော်လှန်ရေးတပ်မတော်ထဲကို အလင်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ် ဒီဇာတ်ကားရဲ့ The white soldierဆိုတာ လူဖြူစစ်သားဖြစ်တဲ့ သူ့ကိုရည်ညွှန်းခဲ့တာပါ ပြင်သစ်စစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြူတ်တဲ့လုပ်ရပ်တွေ၊ဗီယက်နမ်ပြည်သူတွေရဲ့သနားဖွယ်ရာ အဖြစ်အပျက်တွေကို ဒီဇာတ်ကားမှာမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်လို့ခံစားအားပေးကြပါဦးနော် Review – Hmue File Size – 2.4GB Format…mp4 Quality : 1080p Blu-ray Genre : War,Drama Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hmue Encoded by Arrow ==================================================================== App ဒေါငျးရန် App Link မနျဘာဝငျလိုသူမြား viber – 09691177142
IMDB: 6.4/10 133 votes
The Battle at Lake Changjin (2021) ##unicode ဒီတဈခေါကျမှာတော့စဈကားကောငျးကောငျးလေးတဈကားကိုရှေးခယျြပါတယျ သမိုငျးတဈလြှောကျမှာအမရေိကနျမရိနျးစဈတပျတှအေထိနာဆုံးတိုကျပှဲတဈခုဖွဈတဲ့ "Battle of Chosin Reservior" အကွောငျးကိုရိုကျကူးတငျဆကျထားတာပဲဖွဈပါတယျ ဒီတိုကျပှဲဟာဆိုရငျ ၁၉၅၀ နိုဝငျဘာလ ၂၆ ရကျနကေ့နေ ဒီဇငျဘာလ ၁၃ရကျနအေ့ထိ ဖွဈပှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ စဈပှဲဖွဈပှားတဲ့အခြိနျဟာဆိုရငျအရမျးကိုအေးတဲ့ဆောငျးရာသီဖွဈတဲ့အတှကျ နှဈဖကျလုံးအတှကျခကျခဲခဲ့တဲ့တိုကျပှဲပဲဖွဈပါတယျ မွောကျကိုရီးယားကိုကြူးကြျောလာတဲ့ အမရေိကနျစဈတပျတှကေိုကိုရီးယားနိုငျငံဘကျကကူညီပေးခဲ့တဲ့ဒီတိုကျပှဲမှာဆိုရငျ တရုတျစဈသားတှအေမြားအပွားကရြှုံးခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ ဒီကားလေးထဲမှာဆိုရငျထိုတိုကျပှဲအသေးစိတျကိုတှမွေ့ငျရမှာဖွဈပွီးတော့ တရုတျစဈသားတှအေနနေဲ့ဘယျလိုမြိုးအခကျအခဲဒုက်ခတှကေိုကြျောလှားပွီးအောငျပှဲရယူပေးခဲ့တယျဆိုတာကို ထငျထငျရှားရှားမွငျအောငျရိုကျကူးပွသပေးထားတဲ့ဇာတျလမျးကောငျးလေးတဈကားဖွဈပါတယျ ##zawgyi ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စစ်ကားကောင်းကောင်းလေးတစ်ကားကိုရွေးချယ်ပါတယ် သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအမေရိကန်မရိန်းစစ်တပ်တွေအထိနာဆုံးတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ "Battle of Chosin Reservior" အကြောင်းကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီတိုက်ပွဲဟာဆိုရင် ၁၉၅၀ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ကနေ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ရက်နေ့အထိ ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် စစ်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်ဟာဆိုရင်အရမ်းကိုအေးတဲ့ဆောင်းရာသီဖြစ်တဲ့အတွက် နှစ်ဖက်လုံးအတွက်ခက်ခဲခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ် မြောက်ကိုရီးယားကိုကျူးကျော်လာတဲ့ အမေရိကန်စစ်တပ်တွေကိုကိုရီးယားနိုင်ငံဘက်ကကူညီပေးခဲ့တဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာဆိုရင် တရုတ်စစ်သားတွေအများအပြားကျရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် ဒီကားလေးထဲမှာဆိုရင်ထိုတိုက်ပွဲအသေးစိတ်ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ တရုတ်စစ်သားတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုကျော်လွှားပြီးအောင်ပွဲရယူပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကို ထင်ထင်ရှားရှားမြင်အောင်ရိုက်ကူးပြသပေးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် Review – Phyu Sin File Size – 1.2GB,2.5GB Format…mp4 Quality : 1080p ,720p Genre : Action,Drama,History,War Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow
IMDB: 5.0/10 1,359 votes
Charging Out the Prisoner Camp (2021) (App member only) ##unicode ဒီဇာတျကားကတော့ ဂပြနျတှေ တရုတျကိုကြူးကြျောနယျခြဲ့တဲ့အခြိနျ တရုတျစဈသုံ့ပနျးတှညှေငျးပနျးနှိပျစကျခံရမှုတှကေိုရိုကျကူးပွထားတဲ့ဇာတျကားပဲဖွဈပါတယျ ဂပြနျတှရေဲ့စဈသုံ့ပနျးအကဉျြးထောငျတှဟော နိုငျငံတကာစညျးမဉျြးစညျးကမျးတှကေိုခြိုးဖောကျထားပွီး ရကျစကျကွမျးကွုတျတဲ့နရောတဈခုပါ အဲဒီစဈသုံ့ပနျးစခနျးမှာလာဆုံကွတဲ့ တရုတျလူမြိုးတှရေဲ့ဘဝဇာတျကွောငျးတှကေိုလညျး ဒီဇာတျကားမှာဖျောပွထားပါတယျ အနောကျတိုငျးသားတှတေောငျ စခနျးကို စဈသုံ့ပနျးအနနေဲ့ရောကျလာခဲ့ပွီး ဂပြနျတှရေဲ့ထငျသလိုသတျဖွတျမှုကိုခံခဲ့ရပါတယျ ဒါပမေယျ့ ဂပြနျတှေ စဈပှဲတှမှောရူံးနိမျ့လာပွီး စဈအသုံးစရိတျတှမေလောကျမငဖွဈနခြေိနျမှာ အကဉျြးသားတှကေ အခှငျ့ကောငျးကိုအမိဖမျးပွီး စခနျးကထှကျပွေးဖို့ကွိုးစားခဲ့ကွပါတယျ သူတို့တှလှေတျမွောကျနိုငျပါ့မလား ဘယျလိုဇာတျလမျးလှညျ့ကှကျတှကွေုံရဦးမှာလဲဆိုတာ ဒီဇာတျကားမှာကွညျ့ရူအားပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi ဒီဇာတ်ကားကတော့ ဂျပန်တွေ တရုတ်ကိုကျူးကျော်နယ်ချဲ့တဲ့အချိန် တရုတ်စစ်သုံ့ပန်းတွေညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရမှုတွေကိုရိုက်ကူးပြထားတဲ့ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ် ဂျပန်တွေရဲ့စစ်သုံ့ပန်းအကျဉ်းထောင်တွေဟာ နိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်ထားပြီး ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့နေရာတစ်ခုပါ အဲဒီစစ်သုံ့ပန်းစခန်းမှာလာဆုံကြတဲ့ တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းတွေကိုလည်း ဒီဇာတ်ကားမှာဖော်ပြထားပါတယ် အနောက်တိုင်းသားတွေတောင် စခန်းကို စစ်သုံ့ပန်းအနေနဲ့ရောက်လာခဲ့ပြီး ဂျပန်တွေရဲ့ထင်သလိုသတ်ဖြတ်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ် ဒါပေမယ့် ဂျပန်တွေ စစ်ပွဲတွေမှာရူံးနိမ့်လာပြီး စစ်အသုံးစရိတ်တွေမလောက်မငဖြစ်နေချိန်မှာ အကျဉ်းသားတွေက အခွင့်ကောင်းကိုအမိဖမ်းပြီး စခန်းကထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ် သူတို့တွေလွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလား ဘယ်လိုဇာတ်လမ်းလှည့်ကွက်တွေကြုံရဦးမှာလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာကြည့်ရူအားပေးကြပါဦးနော် Review – Hmue File Size – 1.3GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL Genre : War.Action Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hmue Encoded by Arrow ==================================================================== App ဒေါငျးရန် App Link မနျဘာဝငျလိုသူမြား
IMDB: 6.5/10 8423 votes
Charging Out the Prisoner Camp (2021)
Squad (2021) (App member only) ##unicode ဒီတဈခေါကျမှာတော့အိန်ဒိယအကျရှငျကားသဈလေးကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ ဇာတျလမျးအကွောငျးအရာလေးကတော့ဒေါကျတာဘာနာဂြီဟာအိန်ဒိယနိုငျငံတိုးတကျဖှံ့ဖွိုးရေးအတှကျစကျရုပျတှေ တီထှငျအောငျမွငျခဲ့တဲ့သိပ်ပံပညာရှငျတဈယောကျဖွဈပါတယျ ဒါပမေယျ့စကျရုပျတှကေိုတိုကျပှဲမှာပထမဆုံးစမျးသပျအသုံးပွုတဲ့အခါ စကျရုပျတှဟောလူဆိုးလူကောငျးမခှဲခွားနိုငျသေးတာကွောငျ့အပွဈမဲ့တဲ့ရှာသား ၄၀၀၀ ကြျောလောကျကိုသတျဖွတျမိခဲ့ပါတယျ ဒါကိုသိသှားတဲ့ဒေါကျတာဘာနာဂြီဟာသူ့ရဲ့စကျရုပျတှကေိုဖကျြသိမျးပွီးသူ့ရဲ့စမျးသပျခကျြတှကေိုယူပွီး နိုငျငံထဲကနထှေကျပွေးသှားပါတော့တယျ နောကျပိုငျးမှာတော့ကမ်ဘာပျေါကနိုငျငံတှဟောဒေါကျတာဘာနာဂြီရဲ့နညျးပညာကိုရယူဖို့အတှကျအပွငျးအထနျကွိုးစားလာပါတော့တယျ ဒီလိုနဲ့ဘငျးတို့တပျဖှဲ့ဟာဆိုရငျဒေါကျတာဘာနာဂြီရဲ့ကနျြရှိတဲ့မွေးဖွဈသူမီမီဆိုတဲ့ကောငျမလေးကိုသူမြားနိုငျငံတှခေျေါယူတာ မခံရအောငျကာကှယျဖို့အတှကျတာဝနျပေးခံရပါတော့တယျ အထူးတပျသားဘငျးအနနေဲ့မဈရှငျကိုအောငျမွငျအောငျလုပျနိုငျပါ့မလား ဘယျလိုအခကျအခဲတှေ အန်တရာယျတှကေိုကြျောဖွတျသှားရမလဲဆိုတာကိုစိတျဝငျစားဖှယျကွညျ့ရှုကွရမယျ့ ဇာတျကားကောငျးလေးဖွဈပါတယျ ##zawgyi ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အိန္ဒိယအက်ရှင်ကားသစ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ဒေါက်တာဘာနာဂျီဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်စက်ရုပ်တွေ တီထွင်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့်စက်ရုပ်တွေကိုတိုက်ပွဲမှာပထမဆုံးစမ်းသပ်အသုံးပြုတဲ့အခါ စက်ရုပ်တွေဟာလူဆိုးလူကောင်းမခွဲခြားနိုင်သေးတာကြောင့်အပြစ်မဲ့တဲ့ရွာသား ၄၀၀၀ ကျော်လောက်ကိုသတ်ဖြတ်မိခဲ့ပါတယ် ဒါကိုသိသွားတဲ့ဒေါက်တာဘာနာဂျီဟာသူ့ရဲ့စက်ရုပ်တွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးသူ့ရဲ့စမ်းသပ်ချက်တွေကိုယူပြီး နိုင်ငံထဲကနေထွက်ပြေးသွားပါတော့တယ် နောက်ပိုင်းမှာတော့ကမ္ဘာပေါ်ကနိုင်ငံတွေဟာဒေါက်တာဘာနာဂျီရဲ့နည်းပညာကိုရယူဖို့အတွက်အပြင်းအထန်ကြိုးစားလာပါတော့တယ် ဒီလိုနဲ့ဘင်းတို့တပ်ဖွဲ့ဟာဆိုရင်ဒေါက်တာဘာနာဂျီရဲ့ကျန်ရှိတဲ့မြေးဖြစ်သူမီမီဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုသူများနိုင်ငံတွေခေါ်ယူတာ မခံရအောင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်တာဝန်ပေးခံရပါတော့တယ် အထူးတပ်သားဘင်းအနေနဲ့မစ်ရှင်ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ပါ့မလား ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ အန္တရာယ်တွေကိုကျော်ဖြတ်သွားရမလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုကြရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် Review – Phyu Sin File Size – 2.4GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL Genre : Action,War Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin & Hmue Encoded by Arrow ==================================================================== App ဒေါငျးရန် App Link မနျဘာဝငျလိုသူမြား viber – 09691177142
IMDB: 7.8/10 5k votes
Ace of Legend (2021) (App member only) ##unicode ခငျြခတျေနှောငျးပိုငျးကာလ အငျအားနညျး ခတျေနောကျကနြတေဲ့ ဘုရငျအစိုးရအုပျခြုပျခြိနျ ကှမျကြိုးကို နိုငျငံခွားသားတှကေ ကြူးကြျောဖို့မကျြစိကနြပေါတယျ။ အင်ျဂလိပျ ဂပြနျနှဈနိုငျငံ ပူးပေါငျးပွီး ခုခံသူတှကေို သတျဖွတျ အုပျခြုပျရေးအဖှဲ့က အရာရှိကွီးတှကေို ပွနျပေးဆှဲကွပွီး ကှမျကြိုးမွို့ကို သိမျးပိုကျနိုငျဖို့ အားထုတျကွရငျး ကှမျကြိုးမွို့ကို အဓိကကာကှယျပေးနိုငျအောငျ စီမံထားတဲ့ နဂါးကိုးကောငျ လြို့ဝှကျသော့၉ခြောငျး အကွောငျး သိသှားကွပါတယျ။ ဂပြနျဘကျက ဒီသော့တှကေို ရဖို့ကွိုးစားနခြေိနျမှာ လနျြကနျြးရူအမတျကွီးရဲ့ စီမံမှုနဲ့ သော့တှကေို ထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျနရေတဲ့ သိုငျးသမား ၁၀ယောကျကလဲ တဈဖကျမှာ သှားစုစညျးမိကွပီး မွို့ကိုကာကှယျဖို့ အတူကွိုးစားကွပါတယျ။ အငျအားခငျြးမမြှတဲ့အနအေထားမှာ ကှမျကြိုးကို ကြူးကြျောမခံရအောငျ ကာကှယျနိုငျမလား ဆိုတာတော့ ဆုံးအောငျကွညျ့ရပါမယျ။ တကယျရှိခဲ့တဲ့ သူရဲကောငျး ဆယျယောကျ နဲ့ နောကျခံသမိုငျးဖွဈရပျမှနျကို အခွခေံထားတဲ့ အကျရှငျကားလေးပါ။ ဒါပမေယျ့ လေးလေးလံလံမဖွဈအောငျ တခြို့နရောတှမှော ကွညျ့ကောငျးမယျ့ ပုံစံယူရိုကျထားတာကွောငျ့ သမိုငျးနောကျခံကားနဲ့ မတူတော့ပဲ ပေါ့ပါးတဲ့ခတျေပျေါအကျရှငျကားတဈကားနဲ့ ပိုတူပါတယျ။ ##zawgyi ချင်​ခေတ်​နှောင်းပိုင်းကာလ အင်အား​နည်း ခေတ်​နောက်ကျနေတဲ့ ဘုရင်အစိုးရအုပ်ချုပ်ချိန် ကွမ်ကျိုးကို နိုင်ငံခြားသား​တွေက ကျူး​ကျော်ဖို့မျက်စိကျ​နေပါတယ်။ အင်္ဂလိပ် ဂျပန်နှစ်နိုင်ငံ ...
IMDB: 6.8/10 14587 votes
Ace of Legend (2021)
Hell Hath No Fury (2021) (App only) (free ကွညျ့ခငျြတဲ့သူတှလေဲ app ကနဝေငျကွညျ့လို့ရပါတယျ) ##unicode ဒီတဈခေါကျတငျဆကျပေးမှာကတော့ Hell Hath No Fury ဆိုတဲ့အကျရှငျကားလေးဖွဈပါတယျ ဒုတိယကမ်ဘာစဈအတှငျးပွငျသဈလူမြိုတဈယောကျဖွဈတဲ့မာရီဒူဂြာဒငျဟာသူတို့နိုငျငံရဲ့သစ်စာဖောကျအဖွဈစှပျစှဲပွီး ကွိုးပေးခံရခါနီးမှာပဲ အမရေိကနျစဈသားတှကေသဘောတူညီမှုတဈခုလုပျပွီးမာရီကိုကယျတငျပေးခဲ့ပါတယျ အဲ့တာကတော့စဈပှဲအတှငျးမာရီနဲ့ခဈြကွိုကျခဲ့ဖူးတဲ့နာဇီစဈသားတဈယောကျဝှကျထားတဲ့ရှတေုံးတှကေိုသင်ျခြိုငျးမှာ လိုကျရှာပေးရမှာဖွဈပါတယျ အမရေိကနျစဈသားတှဟောရှတှေကေိုလိုခငျြဇောနဲ့သင်ျခြိုငျးကိုရောကျလာခဲ့ပမေယျ့ တဈနရောပွီးတဈနရောတူးပွီးတဲ့အထိရှခြေောငျးတှကေိုရှာမတှခေဲ့ပါဘူး ဒါ့အပွငျသင်ျခြိုငျးစောငျ့တဈယောကျနဲ့အတူလူတဈယောကျပါရောကျလာပွီးသူတို့ကိုပဈခတျလုပျကွံတဲ့အခါမှာတော့ အမရေိကနျစဈသားတှဟောလူတှလေညျးဆုံးရှုံး‌ ရှတှေလေညျးဆုံးရှုံးနဲ့အခကျတှနေ့ပေါတော့တယျ အဲ့ဒီအတှကျအမရေိကနျစဈသားတှဟောရှခြေောငျးတှရှေိတဲ့နရောကိုသခြောပွောဖို့မာရီကိုဖိအားပေးလာပါတော့တယျ မာရီတဈယောကျအမရေိကနျတှလေိုခငျြတဲ့ရှခြေောငျးတှကေိုရှာပေးလိုကျမှာလား ဒါမှမဟုတျသူ့မှာဖုံးကှယျထားတဲ့လြှို့ဝှကျခကျြရှိနသေေးလားဆိုတာကိုတော့ဇာတျလမျးထဲမှာဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့ပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Hell Hath No Fury ဆိုတဲ့အက်ရှင်ကားလေးဖြစ်ပါတယ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းပြင်သစ်လူမျိုတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မာရီဒူဂျာဒင်ဟာသူတို့နိုင်ငံရဲ့သစ္စာဖောက်အဖြစ်စွပ်စွဲပြီး ကြိုးပေးခံရခါနီးမှာပဲ အမေရိကန်စစ်သားတွေကသဘောတူညီမှုတစ်ခုလုပ်ပြီးမာရီကိုကယ်တင်ပေးခဲ့ပါတယ် အဲ့တာကတော့စစ်ပွဲအတွင်းမာရီနဲ့ချစ်ကြိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့နာဇီစစ်သားတစ်ယောက်ဝှက်ထားတဲ့ရွှေတုံးတွေကိုသင်္ချိုင်းမှာ လိုက်ရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် အမေရိကန်စစ်သားတွေဟာရွှေတွေကိုလိုချင်ဇောနဲ့သင်္ချိုင်းကိုရောက်လာခဲ့ပေမယ့် တစ်နေရာပြီးတစ်နေရာတူးပြီးတဲ့အထိရွှေချောင်းတွေကိုရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူး ဒါ့အပြင်သင်္ချိုင်းစောင့်တစ်ယောက်နဲ့အတူလူတစ်ယောက်ပါရောက်လာပြီးသူတို့ကိုပစ်ခတ်လုပ်ကြံတဲ့အခါမှာတော့ အမေရိကန်စစ်သားတွေဟာလူတွေလည်းဆုံးရှုံး‌ ရွှေတွေလည်းဆုံးရှုံးနဲ့အခက်တွေ့နေပါတော့တယ် အဲ့ဒီအတွက်အမေရိကန်စစ်သားတွေဟာရွှေချောင်းတွေရှိတဲ့နေရာကိုသေချာပြောဖို့မာရီကိုဖိအားပေးလာပါတော့တယ် မာရီတစ်ယောက်အမေရိကန်တွေလိုချင်တဲ့ရွှေချောင်းတွေကိုရှာပေးလိုက်မှာလား ဒါမှမဟုတ်သူ့မှာဖုံးကွယ်ထားတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ရှိနေသေးလားဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော် Review – Phyu Sin File Size – 1.3GB,2.4GB Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Drama Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow ==================================================================== App ဒေါငျးရန် App Link မနျဘာဝငျလိုသူမြား viber – 09691177142
IMDB: 2.9/10 46 votes
Cliffs of Freedom (2019) (App member only) ##unicode Cliffs Of Freedom ဇာတျကားကတော့ Marianne Metropoulosရဲ့Daughter of Destiny ဝတ်ထုကိုပွနျလညျရိုကျကူးထားတဲ့ကားဖွဈပါတယျ။ ဒီဇာတျကားလေးကတော့ ရနျသူကိုခဈြမိသှားတဲ့ လှတျလပျရေးအတှကျတိုကျပှဲဝငျခဲ့တဲ့Greekမိနျးမငယျလေးအကွောငျးရိုကျကူးထားတာဖွဈပါတယျ။ နှဈပေါငျး၄၀၀လောကျ Turkishတှအေုပျစိုးထားတာခံနရေတဲ့အတှကျ Greekတှကေ Turkishတှကေို ပုနျကနျဖို့စတငျခဲ့တယျ။ Anna Christinaဟာ ရှာငယျလေးမှာ မောငျလေးနှဈယောကျနဲ့အတူနထေိုငျနတေဲ့ မိနျးမငယျလေးတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ တဈနမှေ့ာတော့ သူတို့ရှာကိုTurkishတှရေောကျလာပွီးတော့ Anna Christinaအတှကျကံဆိုးမှုတှရေောကျလာခဲ့တယျ။ Turkishစဈသားတှကေသူ့အဖကေို သူလြိုအဖွဈစှပျစှဲကာ သူ့အဖေ၊အမအေပါအဝငျ မောငျလေးနှဈယောကျကိုပါ သတျဖွတျလိုကျခဲ့တယျ။ကံကောငျးစှာနဲ့ Anna Christinaဟာ အဝေးရောကျနတောမို့ အသကျရှငျကနျြခဲ့ပမေဲ့ သူ့မိသားစုတဈခုလုံးကတော့ ရကျစကျစှာအသတျဖွတျခံလိုကျရတယျ။ မိသားစုရဲ့သဆေုံးမှုကို လကျတုံပွနျဖို့အတှကျ Turkishတှကေို ပုနျကနျတဲ့အဖှဲ့အစညျးထဲAnna Christina တဈယောကျ ဝငျရောကျသှားခဲ့တယျ။ဒါပမေဲ့ သူ့ကိုငယျငယျက ကယျတငျခဲ့တဲ့ Turkishဗိုလျကွီးနဲ့ ပွနျလညျတှဆေုံ့ခဲ့ခြိနျမှာတော့ Anna Christinaတဈယောကျ ရနျသူနဲ့ဘဲခဈြမိသှားမလား။ မိသားစုအတှကျဘဲ လကျစားခဖြေို့ဆကျလုပျမလားဆိုတာ ကွညျ့ရှုကွပါအုံး။ ##zawgyi Cliffs Of Freedom ဇာတ်ကားကတော့ Marianne Metropoulosရဲ့Daughter of Destiny ၀တ္ထုကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ ရန်သူကိုချစ်မိသွားတဲ့ လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့Greekမိန်းမငယ်လေးအကြောင်းရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း၄၀၀လောက် Turkishတွေအုပ်စိုးထားတာခံနေရတဲ့အတွက် Greekတွေက Turkishတွေကို ပုန်ကန်ဖို့စတင်ခဲ့တယ်။ Anna Christinaဟာ ရွာငယ်လေးမှာ ...
IMDB: 6.3/10 465 votes
Blizzard of Souls (2021) ##unicode ဒီဇာတျကားကတော့ ပထမကမ်ဘာစဈမှာ သူကိုယျတိုငျ Latvianတပျသားအနနေဲ့ပါဝငျခဲ့ပွီး ဖွဈရပျမှနျတိုကျပှဲအတှအေ့ကွုံတှကေိုရေးသားခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာရဲ့စာအုပျကို ရုပျရှငျပွနျလညျရိုကျကူးထားတဲ့ စဈကားကောငျးတဈကားပဲဖွဈပါတယျ ပထမကမ်ဘာစဈရဲ့ဆိုးရှားလှတဲ့တိုကျပှဲအတှအေ့ကွုံတှအေကွောငျး ထိုအခြိနျကလှတျလပျရေးမရသေးတဲ့ Latviaနိုငျငံရဲ့အခကျအခဲတှအေကွောငျးကို ၁၇နှဈသားကောငျလေးတဈယောကျရဲ့ရူ့ထောငျ့ကနဖေျောပွထားတဲ့ဇာတျကားကောငျးပါ ထို၁၇နှဈသားကောငျလေးရဲ့အိမျကို ဂြာမနျတပျသားတှရေောကျလာပွီး သူ့အမကေို့ပဈသတျသှားခဲ့ပါတယျ အဲဒီနောကျ ဂြာမနျတှကေိုလကျစားခခြေငျြစိတျနဲ့ သူတို့ညီအဈကိုနှဈယောကျနဲ့ ပငျစငျစားတပျအရာရှိအဖဖွေဈသူဟာ ဇာဘုရငျလကျအောကျကနေ ဂြာမနျတှကေိုတိုကျဖို့ စဈတပျထဲကိုဝငျခဲ့ပါတယျ ထိုလူငယျလေးရဲ့ပထမကမ်ဘာစဈအတှအေ့ကွုံတှအေကွောငျး ရှရှားဇာဘုရငျဘကျကတိုကျခိုကျပေးရာကနေ အမြားအပွားသဆေုံးခဲ့ရတဲ့ Latvianစဈသားတှအေကွောငျးကို ဒီဇာတျကားမှာဖျောပွထားတာပဲဖွဈလို့ ကွညျ့လို့ကောငျးမယျ့ဇာတျကားတဈကားပဲဖွဈပါတယျ ##zawgyi ဒီဇာတ်ကားကတော့ ပထမကမ္ဘာစစ်မှာ သူကိုယ်တိုင် Latvianတပ်သားအနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ရပ်မှန်တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေကိုရေးသားခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာရဲ့စာအုပ်ကို ရုပ်ရှင်ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ စစ်ကားကောင်းတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ် ပထမကမ္ဘာစစ်ရဲ့ဆိုးရွားလှတဲ့တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေအကြောင်း ထိုအချိန်ကလွတ်လပ်ရေးမရသေးတဲ့ Latviaနိုင်ငံရဲ့အခက်အခဲတွေအကြောင်းကို ၁၇နှစ်သားကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ရူ့ထောင့်ကနေဖော်ပြထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းပါ ထို၁၇နှစ်သားကောင်လေးရဲ့အိမ်ကို ဂျာမန်တပ်သားတွေရောက်လာပြီး သူ့အမေ့ကိုပစ်သတ်သွားခဲ့ပါတယ် အဲဒီနောက် ဂျာမန်တွေကိုလက်စားချေချင်စိတ်နဲ့ သူတို့ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်နဲ့ ပင်စင်စားတပ်အရာရှိအဖေဖြစ်သူဟာ ဇာဘုရင်လက်အောက်ကနေ ဂျာမန်တွေကိုတိုက်ဖို့ စစ်တပ်ထဲကိုဝင်ခဲ့ပါတယ် ထိုလူငယ်လေးရဲ့ပထမကမ္ဘာစစ်အတွေ့အကြုံတွေအကြောင်း ရှရှားဇာဘုရင်ဘက်ကတိုက်ခိုက်ပေးရာကနေ အများအပြားသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ Latvianစစ်သားတွေအကြောင်းကို ဒီဇာတ်ကားမှာဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်လို့ ကြည့်လို့ကောင်းမယ့်ဇာတ်ကားတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ် Review – Hmue File Size –1.2GB,2.4GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Genre : Drama,War Subtitle : Hmue Encoded by Arrow
IMDB: 7.5/10 3,447 votes
Blizzard of Souls (2021)
Runt (2021) ##unicode အခုတဈခေါကျမှာတော့ ၂၀၂၀ ခုနှဈလောကျကထှကျရှိခဲ့တဲ့ အမရေိကနျ Thriller ကားလေးတဈကားကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ Cameron Boyce မသဆေုံးခငျနောကျဆုံးရိုကျကူးခဲ့တဲ့ကားလေးဖွဈပါတယျ ကယျလျဟာကြောငျးမှာရှိတဲ့လူတဈစုအနိုငျကငျြ့ခံရတဲ့ ဆယျကြျောသကျကောငျလေးဖွဈပါတယျ သူ့အမကေလညျးအမွဲတမျးအလုပျကိစ်စနဲ့ရှုပျနပွေီး ကယျလျကိုဘယျတော့မှဂရုမစိုကျအားပါဘူး ကယျလျရဲ့ဘဝမှာအခဈြဆုံးနဲ့အရငျးနှီးဆုံးဆိုလို့ သူ့ရဲ့ခှေးလေးရနျ့ပဲရှိတာပါ တဈရကျမှာတော့ကယျလျဟာသူ့ကိုအမွဲတမျးအနိုငျကငျြ့နကေဗြဈကိုပွနျတိုကျခိုကျပွီး လကျထိခိုကျအောငျမတျောတဆလုပျမိလိုကျပါတယျ ဘစျေ့ဘောကစားတဲ့ဗဈအတှကျသူ့လကျကအရမျးကိုအရေးကွီးပွီး လကျဒဏျရာကွောငျ့ ကစားပှဲမှာပါဝငျပွီးမကစားနိုငျတော့တဲ့အခါ ဗဈတဈယောကျ ကယျလျကိုအငွိုးထားပါတော့တယျ ကယျလျတဈယောကျပွဿနာတှကေိုတဈယောကျတညျးဘယျလိုဖွရှေငျးသှားမလဲ အမွဲတမျးအနိုငျကငျြ့ခံနရေတဲ့ကယျလျတဈယောကျဆကျပွီးအရှုံးပေးနရေဦးမှာလားဆိုတာကိုဆကျလကျကွညျ့ရှုပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်လောက်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ အမေရိကန် Thriller ကားလေးတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Cameron Boyce မသေဆုံးခင်နောက်ဆုံးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ် ကယ်လ်ဟာကျောင်းမှာရှိတဲ့လူတစ်စုအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးဖြစ်ပါတယ် သူ့အမေကလည်းအမြဲတမ်းအလုပ်ကိစ္စနဲ့ရှုပ်နေပြီး ကယ်လ်ကိုဘယ်တော့မှဂရုမစိုက်အားပါဘူး ကယ်လ်ရဲ့ဘဝမှာအချစ်ဆုံးနဲ့အရင်းနှီးဆုံးဆိုလို့ သူ့ရဲ့ခွေးလေးရန့်ပဲရှိတာပါ တစ်ရက်မှာတော့ကယ်လ်ဟာသူ့ကိုအမြဲတမ်းအနိုင်ကျင့်နေကျဗစ်ကိုပြန်တိုက်ခိုက်ပြီး လက်ထိခိုက်အောင်မတော်တဆလုပ်မိလိုက်ပါတယ် ဘေ့စ်ဘောကစားတဲ့ဗစ်အတွက်သူ့လက်ကအရမ်းကိုအရေးကြီးပြီး လက်ဒဏ်ရာကြောင့် ကစားပွဲမှာပါဝင်ပြီးမကစားနိုင်တော့တဲ့အခါ ဗစ်တစ်ယောက် ကယ်လ်ကိုအငြိုးထားပါတော့တယ် ကယ်လ်တစ်ယောက်ပြဿနာတွေကိုတစ်ယောက်တည်းဘယ်လိုဖြေရှင်းသွားမလဲ အမြဲတမ်းအနိုင်ကျင့်ခံနေရတဲ့ကယ်လ်တစ်ယောက်ဆက်ပြီးအရှုံးပေးနေရဦးမှာလားဆိုတာကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော် Review – Phyu Sin File Size –2.4GB,1.2GB Format…mp4 Quality :1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Drama Subtitle : Phyu Sin Encoded by Arrow
Soldier Boy (App member only) ##unicode ဒုတိယကမ်ဘာစဈအတှငျးအသကျအငယျဆုံးတပျသားတဈဦးဖွဈခဲ့တဲ့ အသကျ၆နှဈအရှယျဆာဂီအလကျစကော့(ရှီရိုဇာ)ရဲ့ဘဝဇာတျကွောငျးကို ရိုကျကူးပုံဖျောထားတဲ့ ဖွဈရပျမှနျကားလေးကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ ဒီကားထဲမှာဆိုရငျကလေးငယျတဈယောကျရဲ့ စဈပှဲအတှငျးကွုံတှခေဲ့ရတဲ့အဖွဈအပကျြတှနေဲ့ ဘဝအခွအေနမြေားကို အသေးစိတျရိုကျကူးတငျပွထားတာကိုကွညျ့ရှုရမှာဖွဈပါတယျ ရှီရိုဇာရဲ့မိခငျနဲ့အဈကိုဖွဈသူဟာဂြာမနျနာဇီတှသေတျတာခံလိုကျရပွီး ရှီရိုဇာကတော့ကံကောငျးထောကျမစှာအသကျရှငျကနျြရဈခဲ့ပါတယျ ရှီရိုဇာဟာဂြာမနျတှလေကျကထှကျပွေးရငျးတောထဲမှာလမျးပြောကျပွီး အားနညျးနတေဲ့အခြိနျမှာပဲ ဆိုဗီယကျကငျးထောကျတှရေဲ့ကယျတငျခွငျးကိုခံလိုကျရပါတယျ နောကျပိုငျးမှာတော့တပျဖှဲ့ရဲ့ကှနျမနျဒါဖွဈသူဟာ သူ့သားအဖွဈမှေးစားလိုကျပါတယျ စဈသားတှကေလညျးရှီရိုဇာကို ခငျတှယျနတောကွောငျ့ရှီရိုဇာတဈယောကျရှတေ့နျးမှာပဲနထေိုငျဖွဈသှားပါတော့တယျ ဖွဈရပျမှနျကားလို့ယုံနိုငျဖှယျမရှိလောကျအောငျ ၆ နှဈအရှယျကလေးရဲ့စဈပှဲအတှငျးကွိုးစားကူညီပုံတှေ နိုငျငံအတှကျ တာဝနျထမျးဆောငျခငျြပုံတှကေို စိတျဝငျစားဖှယျကွညျ့ရှုရမယျ့ ဇာတျကားကောငျးတဈကောငျးဖွဈပါတယျ ##zawgyi ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းအသက်အငယ်ဆုံးတပ်သားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ အသက်၆နှစ်အရွယ်ဆာဂီအလက်စကော့(ရှီရိုဇာ)ရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီကားထဲမှာဆိုရင်ကလေးငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ စစ်ပွဲအတွင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ဘဝအခြေအနေများကို အသေးစိတ်ရိုက်ကူးတင်ပြထားတာကိုကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ် ရှီရိုဇာရဲ့မိခင်နဲ့အစ်ကိုဖြစ်သူဟာဂျာမန်နာဇီတွေသတ်တာခံလိုက်ရပြီး ရှီရိုဇာကတော့ကံကောင်းထောက်မစွာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ် ရှီရိုဇာဟာဂျာမန်တွေလက်ကထွက်ပြေးရင်းတောထဲမှာလမ်းပျောက်ပြီး အားနည်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲ ဆိုဗီယက်ကင်းထောက်တွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ် နောက်ပိုင်းမှာတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ကွန်မန်ဒါဖြစ်သူဟာ သူ့သားအဖြစ်မွေးစားလိုက်ပါတယ် စစ်သားတွေကလည်းရှီရိုဇာကို ခင်တွယ်နေတာကြောင့်ရှီရိုဇာတစ်ယောက်ရှေ့တန်းမှာပဲနေထိုင်ဖြစ်သွားပါတော့တယ် ဖြစ်ရပ်မှန်ကားလို့ယုံနိုင်ဖွယ်မရှိလောက်အောင် ၆ နှစ်အရွယ်ကလေးရဲ့စစ်ပွဲအတွင်းကြိုးစားကူညီပုံတွေ နိုင်ငံအတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ချင်ပုံတွေကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ် Review – Phyu Sin File Size –2.4GB Format…mp4 Quality :1080p WED-DL Genre : Drama,War Subtitle : Phyu Sin Encoded by Arrow ========================================================================================================= App ဒေါငျးရန် App Link မနျဘာဝငျလိုသူမြား viber – 09691177142
IMDB: 6.5/10 361 votes
The Forgotten Battle (2021) (App only) ##unicode ဒုတိယကမ်ဘာစဈအတှငျးဖွဈပှားခဲ့တဲ့စဈပှဲတှထေဲမှာ ၁၉၄၄ ခုနှဈမှာဖွဈပှားခဲ့တဲ့စကောကျလျတိုကျပှဲဟာ ဒကျရျှမွပေျေါမှာဖွဈပှားခဲ့တဲ့ အရှညျလြားဆုံးနဲ့အကွမျးတမျးဆုံး တိုကျပှဲတှထေဲကတဈခုဖွဈခဲ့ပါတယျ တိုကျပှဲဟာငါးပတျကြျောကွာမွငျ့ခဲ့ပွီး တိုကျပှဲအတှငျး မဟာမိတျတပျတှေ ဂြာမနျတှေ အရပျသားတှအေပါအဝငျ အသကျပေါငျးမြားစှာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့တိုကျပှဲလညျးဖွဈပါတယျ မဟာမိတျတပျတှဟော ဥရောပအနောကျမွောကျပိုငျးကိုတပျကူပေးဖို့အတှကျ အနျ့ဝကျပျဆိပျကမျးမွို့ကိုခွကေုပျယူနိုငျဖို့ အရေးတကွီးလိုအပျခဲ့ပါတယျ ဒါကိုသိတဲ့ဂြာမနျတှဟောလညျးအနျ့ဝကျပျကိုလုံးဝထိနျးခြုပျထားပါတယျ စကောကျလျမွဈကမျးရဲ့ ရကွေီးရလြှေံဖွဈနတေဲ့ကုနျးမွကေလညျး မဟာမိတျတပျတှရေဲ့တိုကျစဈဆငျမှုကိုနှောငျ့နှေးကွနျ့ကွာစခေဲ့ပါတယျ ဒီကားထဲမှာဆိုရငျ မဟာမိတျတပျတှအေနျ့ဝကျပျဆိပျကမျးကိုဝငျရောကျလာနိုငျဖို့အတှကျအသကျစှနျ့ပွီးသတငျးယူလာပေးတဲ့သူတှနေဲ့ တိုကျပှဲထဲမှာစတေးခဲ့ရတဲ့သူတှရေဲ့အကွောငျးကို အသေးစိတျရိုကျပွထားတာကိုကွညျ့ရှုကွရမှာဖွဈပါတယျ သမိုငျးထဲမှာအခကျခဲဆုံးနဲ့ အရေးပါဆုံးလို့သတျမှတျထားတဲ့ စကောလျတိုကျပှဲအကွောငျးကို စုံစုံလငျလငျကွညျ့ရှုနိုငျမယျ့ သမိုငျးနောကျခံဇာတျကားလေးဖွဈလို့ ကွညျ့ရှုလိုကျကွပါဦးနျော ##zawgyi ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေထဲမှာ ၁၉၄၄ ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စကောက်လ်တိုက်ပွဲဟာ ဒက်ရ်ှမြေပေါ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အရှည်လျားဆုံးနဲ့အကြမ်းတမ်းဆုံး တိုက်ပွဲတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ် တိုက်ပွဲဟာငါးပတ်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး တိုက်ပွဲအတွင်း မဟာမိတ်တပ်တွေ ဂျာမန်တွေ အရပ်သားတွေအပါအဝင် အသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ် မဟာမိတ်တပ်တွေဟာ ဥရောပအနောက်မြောက်ပိုင်းကိုတပ်ကူပေးဖို့အတွက် အန့်ဝက်ပ်ဆိပ်ကမ်းမြို့ကိုခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ အရေးတကြီးလိုအပ်ခဲ့ပါတယ် ဒါကိုသိတဲ့ဂျာမန်တွေဟာလည်းအန့်ဝက်ပ်ကိုလုံးဝထိန်းချုပ်ထားပါတယ် စကောက်လ်မြစ်ကမ်းရဲ့ ရေကြီးရေလျှံဖြစ်နေတဲ့ကုန်းမြေကလည်း မဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့တိုက်စစ်ဆင်မှုကိုနှောင့်နှေးကြန့်ကြာစေခဲ့ပါတယ် ဒီကားထဲမှာဆိုရင် မဟာမိတ်တပ်တွေအန့်ဝက်ပ်ဆိပ်ကမ်းကိုဝင်ရောက်လာနိုင်ဖို့အတွက်အသက်စွန့်ပြီးသတင်းယူလာပေးတဲ့သူတွေနဲ့ တိုက်ပွဲထဲမှာစတေးခဲ့ရတဲ့သူတွေရဲ့အကြောင်းကို အသေးစိတ်ရိုက်ပြထားတာကိုကြည့်ရှုကြရမှာဖြစ်ပါတယ် သမိုင်းထဲမှာအခက်ခဲဆုံးနဲ့ အရေးပါဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ စကောလ်တိုက်ပွဲအကြောင်းကို စုံစုံလင်လင်ကြည့်ရှုနိုင်မယ့် သမိုင်းနောက်ခံဇာတ်ကားလေးဖြစ်လို့ ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် Review – Phyu Sin File Size –2.4GB,1.2GB Format…mp4 Quality :1080p WED-DL,720p WED-DL Genre : Drama,war,Action Subtitle : Phyu Sin Encoded by Arrow ========================================================================================================= App ဒေါငျးရန် App Link မနျဘာဝငျလိုသူမြား viber – ...
IMDB: 7.5/10 2,405 votes
Sniper3(App member only) ##umicode အခုတငျဆကျပေးလိုကျတဲ့ဇာတျကားကတော့ လူကွိုကျမြားခဲ့တဲ့ Sniperဇာတျကားတှထေဲမှာမှ သုံးကားမွောကျထှကျရှိထားတဲ့ဇာတျကားပဲဖွဈပါတယျ စနိုကျပါသမား တှမျဘတျကတျတဈယောကျ မထငျထားတဲ့အပွောငျးအလဲလှညျ့ကှကျနဲ့ ဘယျလိုကွုံတှရေ့မလဲဆိုတာ ကွညျ့ရူရမှာပါ တှမျဟာ ဗီယကျနမျစဈပှဲမှာ သူ့အသကျကိုကယျတငျပွီးကသြှားတဲ့ သူငယျခငျြးရဲ့ဇနီးနဲ့သားကိုစောငျ့ရှောကျပေးနခေဲ့တဲ့ တဈသနျးမှာတဈယောကျရှားတဲ့ သနေတျသမားကောငျးတဈယောကျပါ တဈနေ့ NSAက သူ့ကို လြို့ဝှကျမဈရှငျခိုငျးဖို့ဆိုပွီးချေါခဲ့ပါတယျ အဲဒီမဈရှငျကတော့ သပွေီလို့သူထငျထားတဲ့ သူ့သူငယျခငျြးကိုသတျဖို့ ဗီယကျနမျကိုသှားဖို့ပါ အဲဒီအခြိနျမှ သူ့သူငယျခငျြးဟာ မသသေေးဘဲ ဗီယကျနမျမှာ မှုးယဈဆေးဝါး လကျနကျမှောငျခိုနဲ့အကွမျးဖကျသမားတှနေဲ့ပူးပေါငျးနတောကိုပါသိခဲ့ရပါတယျ သူ့အသကျသခငျဖွဈတဲ့ သူငယျခငျြးကိုသတျဖို့ထှကျလာခဲ့တဲ့ တှမျတဈယောကျ ဘယျလိုတှကွေုံတှရေ့မလဲဆိုတာကိုတော့ ဒီဇာတျလမျးမှာ စိတျဝငျတစားစောငျ့ကွညျ့ရမှာဖွဈလို့ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ ##zawgyi အခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဇာတ်ကားကတော့ လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ Sniperဇာတ်ကားတွေထဲမှာမှ သုံးကားမြောက်ထွက်ရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ် စနိုက်ပါသမား တွမ်ဘတ်ကတ်တစ်ယောက် မထင်ထားတဲ့အပြောင်းအလဲလှည့်ကွက်နဲ့ ဘယ်လိုကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာ ကြည့်ရူရမှာပါ တွမ်ဟာ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲမှာ သူ့အသက်ကိုကယ်တင်ပြီးကျသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ဇနီးနဲ့သားကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေခဲ့တဲ့ တစ်သန်းမှာတစ်ယောက်ရှားတဲ့ သေနတ်သမားကောင်းတစ်ယောက်ပါ တစ်နေ့ NSAက သူ့ကို လျို့ဝှက်မစ်ရှင်ခိုင်းဖို့ဆိုပြီးခေါ်ခဲ့ပါတယ် အဲဒီမစ်ရှင်ကတော့ သေပြီလို့သူထင်ထားတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းကိုသတ်ဖို့ ဗီယက်နမ်ကိုသွားဖို့ပါ အဲဒီအချိန်မှ သူ့သူငယ်ချင်းဟာ မသေသေးဘဲ ဗီယက်နမ်မှာ မှုးယစ်ဆေးဝါး လက်နက်မှောင်ခိုနဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ပူးပေါင်းနေတာကိုပါသိခဲ့ရပါတယ် သူ့အသက်သခင်ဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းကိုသတ်ဖို့ထွက်လာခဲ့တဲ့ တွမ်တစ်ယောက် ဘယ်လိုတွေကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာကိုတော့ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်လို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Review – Hmue File Size – 1.8GB Format…mp4 Quality ...
IMDB: 5.3/10 3,903 votes
Sniper2(2002) (App member only) ##umicode ဒီတဈခေါကျမှာတော့ ၁၉၉၃ ခုနှဈလောကျထှကျရှိခဲ့တဲ့နာမညျကွီးစနိုကျပါကားရဲ့အဆကျ Sniper2ကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ မရိနျးတပျသားဟောငျးသောမတျဈဘကျကကျဟာ လကျညှိုးတဈခြောငျးဆုံးရှုံးသှားပမေယျ့ အခုထိသနေတျသမားကောငျးတဈယောကျဖွဈနဆေဲပါ တဈနမှေ့ာတော့ ဆားဘီးယားရဲ့ဗိုလျခြုပျဗယျလစတိုးရီးယားဟာ နယျမွအေတှငျးမှာမူစလငျလူမြိုးတှကေိုရှငျးလငျးသုတျသငျနပွေီး နောကျပိုငျးခွိမျးခွောကျမှုဖွဈလာနိုငျတဲ့အတှကျ စီအိုငျအကေစိုးရိမျလာပါ တော့တယျ အဲ့တာကွောငျ့လြှို့ဝှကျလုပျကွံဖို့အတှကျ တပျကွပျကွီးဘကျကကျကိုတာဝနျပေးစခေိုငျးပါတော့တယျ ရနျသူ့နယျမွထေဲကိုဝငျပွီးလုပျကွံရမယျ့အန်တရာယျကွီးတဲ့တာဝနျကွီးကို တပျကွပျကွီးဘကျကကျတဈယောကျ အောငျမွငျအောငျလုပျဆောငျနိုငျပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ ဇာတျလမျးထဲမှာဆကျလကျကွညျ့ရှုလိုကျကွပါဦးနျော ##zawgyi ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ၁၉၉၃ ခုနှစ်လောက်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးစနိုက်ပါကားရဲ့အဆက် Sniper2ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ မရိန်းတပ်သားဟောင်းသောမတ်စ်ဘက်ကက်ဟာ လက်ညှိုးတစ်ချောင်းဆုံးရှုံးသွားပေမယ့် အခုထိသေနတ်သမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နေဆဲပါ တစ်နေ့မှာတော့ ဆားဘီးယားရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဗယ်လစတိုးရီးယားဟာ နယ်မြေအတွင်းမှာမူစလင်လူမျိုးတွေကိုရှင်းလင်းသုတ်သင်နေပြီး နောက်ပိုင်းခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက် စီအိုင်အေကစိုးရိမ်လာပါ တော့တယ် အဲ့တာကြောင့်လျှို့ဝှက်လုပ်ကြံဖို့အတွက် တပ်ကြပ်ကြီးဘက်ကက်ကိုတာဝန်ပေးစေခိုင်းပါတော့တယ် ရန်သူ့နယ်မြေထဲကိုဝင်ပြီးလုပ်ကြံရမယ့်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့တာဝန်ကြီးကို တပ်ကြပ်ကြီးဘက်ကက်တစ်ယောက် အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် Review – Phyu Sin File Size – 1.8GB Format…mp4 Quality :1080p WED-DL Genre : Action,War Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow ========================================================= ========================================================= App ဒေါငျးရန် App Link မနျဘာဝငျလိုသူမြား viber – 09691177142
IMDB: 5.2/10 5,807 votes